Maty ve ny mailaka? Aza milaza izany amin'i Jenni & Janneane | Martech Zone
Maty ve ny mailaka? Aza ilazana izany amin'i Jenni & Janneane
Zoma, Oktobra 29, 2010 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Indraindray ianao dia maheno ireo mimonomonona… maty ny mailaka. Matetika dia ny olona mimenomenona avy amin'ny olona no iharan'ny ady anaty boaty ary tsy nahazo vola tamin'ny fomba ara-dalàna ny ezak'izy ireo mailaka. Lavitra ny maty ny mailaka… ary ny porofo dia toy ny orinasa Indy Mpijery.
Indy Spectator dia orinasa miorina amin'ny mailaka fotsiny. Mampiasa mpanoratra mpanoratra manan-talenta izy ireo hitantara ny zava-misy momba ny hetsika any Indianapolis. I Jenni Edwards dia nahita io hevitra io tany amin'ny tsena hafa ary, satria tambajotram-pifandraisana tsy mampino izy tenany, dia nanambatra hery tamin'i Janneane Blevins izy hamorona ity fanombohana mahomby ity. Hatramin'ny volana aprily, nahita ny lisitry ny mpisoratra anarana indroa heny izy ireo!
Vao haingana izy ireo no namerina namerina, miaraka amin'ny fanampian'ny Kristian Andersen + Associates (iray amin'ireo orinasa manana traikefa tsara indrindra eran'izao tontolo izao… ary mpampiasa an'i Janneane). Efa nahafinaritra ilay gazety noho ny atiny… fa izao dia nahatratra ny atiny ny endrika:
Inona no tiako holazaina? Tsy misy mpanelanelana tsara kokoa hitondra hafatra toa an'io toy ny mailaka. Izy irery, manokana, ary classy. Ny bilaogy dia mpanelanelana tsara, fa ny fampielezana ny rehetra dia mametraka ny atiny amin'ny fomba fijery hafa, ary tsy ho lany lanina amin'ny fomba mitovy amin'izany. Ny famolavolana marika iray mitovy dika amin'ny atiny dia vao mainka saranga… jereo ity mailaka ity!
Tranonkala vaovao, Take II
Aza manisa paikady fanaovana mari-trano
Oct 29, 2010 amin'ny 11: 39 AM
Misaotra Doug amin'ny fitiavana! Toy ny naoty iray - mbola tsy natomboka niaraka tamin'ny marika vaovao ny tranokalanay… tokony ho avy tsy ela ary misy sary mahafinaritra vitsivitsy avy amin'ny Joetography tafiditra ao anaty endrika KA + A - be voninahitra!
Ho fanamarihana - mandefa Startup Spectator ihany koa izahay handrakofana ireo vaovao miandoha manodidina an'i Indy… ho tsara be ihany koa!
Misaotra hatrany - ny mailaka dia mbola tsy maty!